Alaka Banana Republic - esi ísì ụtọ, mmiri na-esi ísì ụtọ, uwe akwa, uwe mwụda, uwe, uwe elu, akpa, akpụkpọ ụkwụ
Banana Republic - uwe ejiji, akpụkpọ ụkwụ, akpa, ísì ụtọ nke ama a ma ama
Banana Republic bụ ụdị ndị American na-eji aka, ngwa, ihe na-esi ísì ụtọ, ngwaahịa ndị ụlọ. Kemgbe mmalite ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyewo uwe maka ndị njem, ma e mesịa, ahịa ahụ kpebiri ịṅa ntị n'ihe ndị dị kwa ụbọchị na uwe ahịa.
Banana Republic - ụdị ụdị?
Ọtụtụ ndị inyom nke ejiji achọ ịma ihe ika nke Banana Republic dị? Ndị guzobere ya bụ di na nwunye Mel na Patricia Ziegler. Ha meghere ụlọ ahịa mbụ ha na San Francisco na 1978. Mgbe afọ 5 gachara, ụlọ ọrụ ahụ bụ GapInc nwetara ụlọ ọrụ ahụ na-emepe emepe. N'afọ 1986, e bipụtara kọntaktị mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, otu afọ ka e mesịrị magazin bụ "Njem", nke na-akọwa banyere njem dị iche iche. N'afọ 1988, ndị ahụ kpebiri ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ.
Akụkọ banyere ika ahụ malitere site na ịzụta jaket maka Mel Ziegler. Ọ na-achọ ngwaahịa n'enweghị akụkụ ọ bụla. Mgbe ọ nọ n'Australia, ọ kpọtara ụlọ uwe atọ, nke nwunye ya were. Ọ chọrọ ime otu ihe dị jụụ maka di ya, nke mere na ọ na-enwe afọ ojuju maka ihe niile masịrị ya. Patricia bụ onye na-emepụta nkà, o wee webata ọtụtụ ihe ndị ọhụrụ pụrụ iche: na-ehichapụ aka na nkwụ, na-agbakwunye mpi na mpi na osisi.
N'ihi ya, Mel nwere mmasị na jaket a, ọtụtụ n'ime ndị enyi ya jikwa uwe ma nye ya iwu. N'oge na-adịghị anya, ndị di na nwunye malitere imepụta uwe ha site na ihe ndị dị n'ahịa ahịa. Ihe ndị a na-eme na-eto eto mgbe GapInc zụtara ya. Site na oge ahụ, Patricia jiri ụbọchị na-arụ ọrụ n'iwepụta uwe ọhụrụ. Ekike ndị ahụ dị nnọọ irè, eji n'oge njem ogologo na dịka ihe ọ na- adị kwa ụbọchị .
Akwa Banana Republic
N'etiti fashionistas gburugburu ụwa, uwe ndị Banana Republic mara nnọọ mma. N'etiti àgwà ya iche nwere ike depụta ihe ndị a:
na nkwekọ nke ika e nwere ihe dị iche iche maka nnọkọ, ihe eji ejiji ụlọ ahịa, nhọrọ ndị na-adịghị mma;
Kemgbe afọ 1990, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ na-egbukepụ egbuke egbuke ma dị mma. Ụdị ndị agha ahụ kwagara ma nyekwuo uwe ndị ka njọ;
cashmere na suede kachasị na imepụta outerwear.
N'oge ahụ, ụlọ ọrụ Banana Republic na-eweta ihe dị iche iche uwe ejiji ákwà, nke a ga-ekewa nke ọma n'ime ihe ndị a:
kwa ụbọchị - jeans-skinnie, boyfriends, leggings na joggers, akwa uwe na skirts skirts, turtlenecks Banana Republic;
azụmahịa - ọ pụtara ihe dị iche iche na agba - ọ nwere ike ịbụ sweaters na mgbatị, ogologo-ogologo skirts ma ọ bụ jaket ahịa;
na mgbede, a na-eme ihe ndị ahụ na-agba ọsọ, ma n'otu oge ahụ ka ọ bụ nwanyị, ọ ga-abụ uwe na ejiji kwesịrị ekwesị, ebe a na-eji ákwà na-egbuke egbuke;
ihe a na-ahụ maka mmepụta mmiri mmiri, akụkụ bụ isi nke ha bụ mma na nkasi obi n'oge nkịta.
Banana Republic uwe mgbokwasị
Maka oge mgbụsị akwụkwọ, ndị inyom na-edozi Banana Banana ga-abụ ngwọta zuru oke. E ji ihe ndị dị otú ahụ mara ya:
agba agba kachasị agbachi agba agba aja, nwa, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ;
ihe atumatu bu ihe choro na onu ogugu n'enye aka nke eriri ma nwee onu ogugu V;
e nwere ngwaahịa ebe a na-agbakwunye ọnụ ọgụgụ ọcha na ọnụego, nke na-emesi ịlụ nwanyị ike;
na uwe elu nwere akpa ego abụọ, nke nwere ọrụ bara uru ma na-eme dị ka ihe mmezi ihe.
Maka ụmụ agbọghọ ndị na-ahọrọ ụta mara mma, ụdị nnụnụ Banana Republic dị mma dị ka uwe. Uzo ya di iche iche gunyere ihe ndi a:
a na-egbukarị ya na nwa, na-ezukọta na agba agba na agba ntụ na agba akwụkwọ;
nwere ike ịbụ ụdị mpempe akwụkwọ dịgasị iche iche, a na-ewere usoro a kachasị ewu ewu dị ka onu;
na Banana Republic, e nwere otu olu akwa ma ọ bụ ngwugwu ;
a na-eme uwe ahụ n'otu nsụgharị ma ọ bụ okpukpu abụọ;
dịka ntanye nwere ike ịbụ bọtịnụ ma ọ bụ agwọ- "àmụmà";
Ogologo nwere ike ịkwụsị n'ogo n'elu ikpere ma ọ bụ daa n'okpuru.
Jacket bụ mgbanwe ọzọ nke uwe ndị mara mma nke Banana Republic. A na-eji nkọwa ndị a akọwa ya:
a nwere ike ịchọta ụdị ọ bụla n'ime oge-oge ma ọ bụ oge oyi;
E nwere ike ịkwado akpa akwa oge-oge na ngwongwo ndị na-agbanwe ya, n'akụkụ akpa, obere nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọ nụchaa;
na nkpuchi, kwa, enwere ike itinye nkpu roba;
n'etiti umu nwanyi, i nwere ike ichota agba ocha;
Mpempe akwụkwọ denim nke dị na jaket dị irè, ọtụtụ n'ime ha na-acha acha anụnụ anụnụ;
Ngwongwo ndị Banana Banana nwere akpa na ebe dị iche iche: na igbe na otu akụkụ ma ọ bụ abụọ, na ala, n'ime;
akpa ike nwere ike isi n'elu ma ọ bụ zoo, ọnụnọ ha na-egosi naanị site na àmụmà;
na tebụl n'oge oyi nwere ike ịnweta ihe ịchọ mma dị ka ihe ịchọ mma nke olu akwa, ọnụego, ihe nkwụnye, akpa. Iji mepụta ha, a ga-eji ihe ndị na-ekpo ọkụ na ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ.
Ihe dị ka ogige ụmụ nwanyị Banana Republic na-achọsi ike mgbe ị na-eke ihe oyiyi na ụdị kazhual . Ọ na-egosipụta njirimara dị otú ahụ:
nwere ihe dị mfe ma gbanwee ya;
Ogige ahụ na-enye ogologo oge, nke nwere ike ịme mma na aji;
na n'ihu ihu e nwere zipa-fastener, nke nwere ike na-ezo, na-onwem na a mmanya na Velcro;
mgbe mgbe n'ogige ntụrụndụ nke Banana Republic, e nwere ụdọ nke na-adọta n'úkwù n'úkwù;
a na-eji jaket dị otú ahụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, nke, ma ọ bụrụ na achọrọ, nwere ike wepụ;
na ogige ndị a na-ahọrọ dị iche iche na-eji agba dị iche iche, na-enwe beige, marsh ma ọ bụ isi awọ.
Banana Republic uwe
N'ọdịiche dịgasị iche iche nke ụdị, ejiji uwe mara mma nke Banana Republic. Otu n'ime ha bụ ihe ndị a:
N'oge ọkọchị, a na-eji motifiri fatịlaịza eme ihe na gburugburu ebe uwe ahụ dị. Ndị a bụ nnukwu ùkwù na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ n'ụzọ dị iche, obere okooko osisi dị iche iche;
ihe ndị na-eme n'oge okpomọkụ nwere ike ịgbatị eriri, uwe aka dị mkpụmkpụ, uwe nwere ike ịdị na-emeghe oghere na aka;
ụlọ ọrụ Banana Republic na-emepụta uwe n'iche dị ala, nke nwere ike zuru oke maka njem gaa n'ọfịs. Eji ha nke kachasị mma, ha nwere ike ịchọta otu ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, basque ma ọ bụ zipa;
n'ihi na ejiji ejiji ejiri agba, ọ bụ isi awọ, nwa, ụda beige.
Pants bụ ihe ọzọ nke uwe na ụdị ejiji Banana Republic na-arụpụta. Ha nwere ụdị dị iche iche:
n'etiti ihe ndị ị na-ahụ anya ị pụrụ ịhụ kpochapụ "ese siga" ma ọ bụ chinoses, ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe;
A na-agbanye n'ịnyịnya ibu na agba ndị mara mma, dịka nwa, isi awọ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
E nwere ọtụtụ ụdị nlezianya dị iche iche nke nwere ọkpụkpụ ma ọ bụ ogologo silhouette;
a na-emepụta ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị ahụ na mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi nke meghere nkwonkwo ụkwụ, nke ị ga-etinye na akpụkpọ ụkwụ mara mma;
enwere ọkpụkpụ Banana Republic, nke na-eji mkpụrụ osisi floral, eriri, ogige.
A na-akwụbara anya dị ukwuu n'apịtị mgbe ị na-eyi uwe. A na-akwanyere ha ùgwù site n'àgwà ndị dị otú ahụ:
Nhọrọ kachasịsị mma bụ skettika nke umunyo nke ndị Arab Republic. Ogologo obere Obere ma ọ bụ maxi dị oke obere;
ọtụtụ uwe mwụda nwere akwa ụkwụ , nke ga-enye ha ohere ịrapara nke ọma na ọnụ ọgụgụ ahụ;
dị ka ihe ndozi, nwere ike inwe bọtịnụ n'otu eriri akara;
ngwaahịa nwere ike ibu igwe ma ọ bụ nwee akwụkwọ ụfọdụ: ihe ịchọ mma okooko osisi ma ọ bụ nke fure;
Akwụkwọ pensụl bụ ewu ewu, ma ị nwekwara ike ịhụ ụdị mgbanwe a. Na-agbakwa uwe, ma na-agbakwunyere flounces.
Akpụkpọ ụkwụ Banana Republic
A na-egosipụta akpụkpọ ụkwụ nke ika a n'ọtụtụ dịgasị iche iche, ha nwere ụdị na ụdị ihe dịgasị iche iche. Otu n'ime ụdị ndị a bụ:
nhọrọ na obere ọsọ, nke nwere akwa mma naanị;
akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ Banana Republic, nke ga-adaba n'uwe mara mma;
dị ka ihe dị iche iche nke ihe ndozi ahụ bụ akwụkwọ na-egbuke egbuke, lacing, oghe akụkụ na akpụkpọ ụkwụ, akụkụ nke onwunwu ma ọ bụ akụkụ dị mma.
Akpa nke Banana Republic
Ụzọ ọzọ nke ika ahụ bụ akpa ụmụ nwanyị Banana Republic. Ha ji nkọwa ndị dị iche iche mara ha:
ọ nwere ike ịbụ obere akpa aka ma ọ bụ nnukwu aka, ebe ị nwere ike itinye ihe niile ịchọrọ;
ngwa nwere obere mkpịsị aka abụọ na eriri ụkwụ ogologo, ekele nke akpa ahụ dị mma iji yikwasị n'ubu;
N'ihe banyere ụcha ahụ, onye nwere ike ịhụ otu ụdị agba, akpa na ụfọdụ akwụkwọ ma ọ bụ ihe na-egbuke egbuke;
Achi ma ọ bụ zipa dị ugbu a dịka ihe ntinye.
Ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ọ bụghị nanị na imepụta ihe ndị e ji ekpuchi ákwà, otu n'ime ebe ya bụ mmiri mposi Banana Republic. Ahịa ahụ na-emepụta aromas bụ nke e ji nlekọta osere, nke na-acha okooko osisi na ihe ndị dị na ya. A na-agbapụta ihe a na-agbapụta, na-ele anya nke ọma, ọ bụ karama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ọ bụ elongated rectangular na akwụkwọ nrịbama nke ìhè, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ agba aja aja.
Nri nwanyi Di nma na ndi nwanyi. Ha na-egosipụta mmetụta nke onye nwe ha, mepụta otu nzuzo. Otu n'ime ihe ndị na-esi ísì ụtọ nke akara ahịa a bụ ihe ndị na-esonụ:
Alabaster - nwere ndetu nke oroma, lotus, egusi, currant na kranber;
Malachite - nwere nkọwa nke ose, mango na-acha akwụkwọ ndụ na mmiri hyacinth;
Oghere anụ ọhịa - egosi onye nwe ya, ọ na-eji guava, mkpụrụ vaịn, kumquat na pear pear;
WildbloomVert - na-emesi àgwà ahụ ike, nke a na-eji nwanyị , nchekwube na ike. N'ebe a, ị nwere ike ịnweta ube, apụl na epupụta nke violet.
Uwe mmezu nke 2014
Agba nke oge mmiri-okpomọkụ oge 2014
Akpụkpọ ụkwụ - oyi 2016
Dolce Gabbana - oge oyi-oyi 2015-2016
Ọkpụkpụ ịcha mma
Utu isi maka obere ntutu 2014
Ejiji ejiji - oge oyi-oyi 2015-2016
Ejiji mara mma 2016
Klaasị cardigans mara mma 2013
Akpụkpọ ụkwụ na ngụsị akwụkwọ 2015
Kedu ka esi esi kpochapu jaket na kozhzama?
Kedu ihe ị ga-eji akwa sundress ogologo?
Ụmụaka tracksuits 2014
Ejiri "Ụgbọ mmiri"
Ihe ngwọta nke viburnum
Chinchilla - na-elekọta ụmụ anụmanụ na-efe efe, ndụmọdụ dị mfe
Hydrangea kwadoro - nkwadebe maka oyi
Ịgba ọgwụ site na diphtheria ka ndị okenye
Bifiform Baby - ntụziaka
Homeopathy Gelzemium - ihe ngosi maka ojiji
Ígwè maka ụmụ nwanyị dị ime
Blueberries na sugar
Uru nke eyịm
Karịa ịchacha pan nke frying si n'èzí?
Mmetụta nrụrụ aka na ụmụ ọhụrụ